विश्वका शक्तिशाली दुई राष्ट्रपति सी र पुटिनबीच भेटवार्ता - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वका शक्तिशाली दुई राष्ट्रपति सी र पुटिनबीच भेटवार्ता
२०७५, २६ भाद्र मंगलवार
मस्को, भदौ २६ । चीनका राष्ट्रपति सी चीनपिङ र उहाँका रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच रूसको सुदूरपूर्वी शहर भ्लादिभोस्टोकमा मङ्गलबार भेट भएको छ ।
भेटमा विश्वका शक्तिशाली दुई नेताबीच दुइपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार तथा विश्वमा शान्तिको सुरक्षा, र विश्वको आर्थिक तथा राजनीतिक स्थायित्वका बिषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ । भ्लालिभोस्टोकमा हुने चौँथो ‘इस्टर्न इकोनोमिक फोरम’मा सहभागी हुन रूसी राष्ट्रपति पुटिनको निमन्त्रणामा सी रूस पुगेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेताबीच भेट वार्ता हुँदैं
रूसको चीनसँग बढ्दो निकट सम्बन्धको सम्मेलनका अवसरमा भाग लिन रूस पुगेका चिनियाँ राष्ट्रपतिको सीको राष्ट्रपति पुटिनले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरे । ‘हामीबीच राजनीतिक, सुरक्षा तथा रक्षा क्षेत्रमा विश्वासिलो सम्बन्ध रहेको छ,’ रूसी राष्ट्रपतिले भने ।
उक्त अवसरमा चीनका राष्ट्रपति सीले दुई मुलुकबीचको मित्रता सधैँ मजबुत रहँदै आएको बताएको जनाइएको छ । सिन्ह्वा
याे पनि पढ्नुस अमेरिकामाथि आणविक आक्रमण भएको खण्डमा कहाँ बस्लान् राष्ट्रपति ट्रंप?
ट्याग्स: President Putin, President Xi Jingping, russia
फेसबुकबाट चिनजान, विवाहको आश्वासन दिएर बलात्कार
कुन पदका लागि कहिले विज्ञापन खुल्छ ? आयोगले निकाल्यो कार्यतालिका (सूचीसहित)
विश्वविद्यालयका परीक्षा अब होम सेन्टरमै हुने
राष्ट्रपतिसँग सुटुक्क माधव नेपालको भेट